Trimetrexate (ထရိုင်မီထရီစိတ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Trimetrexate (ထရိုင်မီထရီစိတ်)
Trimetrexate (ထရိုင်မီထရီစိတ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Trimetrexate (ထရိုင်မီထရီစိတ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Trimetrexate (ထရိုင်မီထရီစိတ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Trimetrexateကို AIDS လူနာများအပါအဝင် ကိုယ်ခံအားနည်းသောလူနာများ (စံပြုထားသောကုသမှုများအား ပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်သူများ) တွင်ဖြစ်သည့်အလတ်စားမှအပြင်းစား Pneumocystis carinii pneumonia (PCP)အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ TrimetrexateကိုLeucovorin နှင့်တွဲပြီးအသုံးပြုသည်။
Trimetrexateသည် ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်သည်။ DNA, RNA နှင့် ပရိုတင်းထုတ်လုပ်ခြင်းအားတားဆီးခြင်းဖြင့် ပိုးများကိုသေစေခြင်းဖြစ်သည်။
Trimetrexate (ထရိုင်မီထရီစိတ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Trimetrexateကို ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်းသုံးစွဲရမည်။ ဆေးပမာဏအတိအကျအတွက် ဆေးအညွှန်းစာတွင် ကြည့်ပါ။
Trimetrexateကိုများသောအားဖြင့် ဆေးခန်း၊ ဆေးရုံတို့တွင် ထိုးဆေးအဖြစ်ထိုးရပါသည်။ Trimetrexateကိုအိမ်တွင်သုံးရမည်ဆိုပါက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမှသင်ပေးသည်များကို သေချာလိုက်နာပါ။
Trimetrexateကို Fluorouracil နှင့် တစ်ချိန်တည်းမပေးရပါ။ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းအချိန်ခြားပေးရမည်။
Trimetrexateတွင် အမှုန်များပါခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းခြင်း၊ ဆေးပုလင်းကွဲနေခြင်း၊ ပျက်စီးနေခြင်းများဖြစ်နေပါကမသုံးပါနှင့်။
အသက်သေနိုင်သည့်ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်စေရန်အတွက် TrimetrexateကိုLeucovorin နှင့် တွဲသုံးရမှရပါမည်။ Trimetrexateကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်ပေးပြီးသည့်နောက် ၇၂ နာရီကြာအောင် Leucovorinကိုဆက်ပေးနေရမည်။ Leucovorinဆေးကိုညွန်ကြားထားသည့်အတိုင်းအကြိမ်ပြည့်သုံးပါ။ Leucovorinကိုမှန်မှန်မထိုးခြင်းအပြည့်မထိုးခြင်းတို့လုပ်မိပါကသေနိုင်သည့်အဆိပ်သင့်မှု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဆေးအပါအဝင် ဆေးထိုးအပ်များကိုကလေးများတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။ ဆေးထိုးအပ်၊ ဆေးထိုးပြွန်နှင့်တခြားပစ္စည်းများကို ပြန်မသုံးရ။ သုံးပြီးပါကသင့်လျော်စွာစွန့်ပစ်ပါ။ ဒေသအလိုက် စွန့်ပစ်ရန်စည်းကမ်းများကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်အားမေးမြန်းပါ။
Trimetrexateတစ်ကြိမ်လွှတ်သွားပါက ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
Trimetrexate (ထရိုင်မီထရီစိတ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Trimetrexateကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Trimetrexateကိုရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Trimetrexateဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းခြင်းကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင် ထားပါ။
Trimetrexateအားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအားမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Trimetrexate (ထရိုင်မီထရီစိတ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Trimetrexateတွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
Steriodမဟုတ်သောအရောင်ကျဆေးများ (ဥပမာ – Ibuprofen) သို့မဟုတ် pristinamycinသောက်နေလျှင်
ရိုးတွင်ချဉ်ဆီဖိနှိပ်ထားခြင်း၊ သွေးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်နှင့်အသည်းရောဂါများရှိနေလျှင်
Trimetrexateသည် သွေးမွှားဥပမာဏကိုလျော့ကျစေပါသည်။ သွေးယိုခြင်းမဖြစ်စေရန် ထိခိုက်မှုများ၊ ပွန်းပဲ့မှုများမဖြစ်စေရန်ရှောင်ပါ။ ပုံမှန်မဟုတ်သည့်သွေးယိုခြင်းများ၊ အညိုအမည်းစွဲခြင်းများ၊ ဝမ်းတွင်သွေးပါခြင်း၊ ဝမ်းအရောင်နက်ခြင်းတို့ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်နှင့်ပြပါ။
Trimetrexateသည် ခန္ဓါကိုယ်မှရောဂါပိုးများကို ပြန်တိုက်နိုင်စွမ်းအားကျစေနိုင်ပါသည်။ အအေးမိနေသူ၊ တခြားပိုးရောဂါရှိနေသူများနှင့် ဝေးဝေးရှောင်ပြီးပိုးမကူးအောင်နေပါ။ ပိုးဝင်သည့်လက္ခဏာများဖြစ်သောဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အကွက်ထခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်းများ ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းပြောပါ။
Neutriphil count, platelet counts, liver function, and kidney function စသည့် ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးချက်များကိုတိုးတက်မှုရှိမရှိနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်မဖြစ်သိနိုင်ရန် လုပ်ရနိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့်ချိန်းဆိုထားတိုင်းသေချာသွားပြပါ။
Trimetrexateသည် အသက်ကြီးသူများတွင် ဒဏ်ပိုဖြစ်နိုင်သောကြောင့် သတိနှင့်သုံးပါ။
ကလေးများတွင် Trimetrexateသုံးရန် မထောက်ခံထားပါ။ စိတ်ချရမှုနှင့် အာနိသင်ရှိမှုတို့အားထုတ်ပြန်မထားပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Trimetrexate (ထရိုင်မီထရီစိတ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Trimetrexate (ထရိုင်မီထရီစိတ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပျောက်မသွားလျှင် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်နှင့်စစ်ဆေးပါ။
ပြင်းထန်သည့်ဓါတ်မတည့်ခြင်း – အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အသက်ရှူုရခက်ခြင်း၊ ရင်ကြပ်ခြင်း၊ မျက်နှာ ပါးစပ် နှုတ်ခမ်း လျှာတို့ ဖောင်းကြွခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Trimetrexate (ထရိုင်မီထရီစိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Trimetrexateသည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်စေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကို စာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်လျှင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
Cisplatin, corticosteroids (e.g., prednisone), cyclosporine, etretinate, NSAIDs (e.g., ibuprofen), penicillins (e.g., amoxicillin), pristinamycin, probenecid, quinolones (e.g., ciprofloxacin), salicylates (e.g., aspirin), sulfonamides (e.g., sulfamethoxazole), tetracyclines (e.g., doxycycline), or trimethoprim စသည့်ဆေးများသည် Trimetrexate ၏ အာနိသင်နှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ချေကိုတိုးစေနိုင်ပြီးအဆိပ်သင့်စေနိုင်ပါသည်။
Digoxin or hydantoins (e.g., phenytoin) စသည့်ဆေးများကTrimetrexate ၏ အာနိသင်ကိုကျစေနိုင်ပါသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Trimetrexate (ထရိုင်မီထရီစိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Trimetrexate က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Trimetrexate (ထရိုင်မီထရီစိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Trimetrexateသည် လက်ရှိသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Trimetrexate (ထရိုင်မီထရီစိတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အချက်အလက်များသိရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ကလေးတွေအတွက် Trimetrexate (ထရိုင်မီထရီစိတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Trimetrexate (ထရိုင်မီထရီစိတ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Trimetrexateကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Trimetrexateကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
Trimetrexate. https://www.drugs.com/cdi/trimetrexate.html. Accessed November 22, 2017
Trimetrexate. http://pennstatehershey.adam.com/content.aspx?productId=45&pid=45&gid=0730. Accessed November 22, 2017